Ny mpampihorohoro sainam-pirenena diso dia manafika an'i London, Manchester, Paris, Barcelona ary Rotterdam amin'ny 23 sy 24 Oktobra? (UPDATE)): Martin Vrijland
Ny mpampihorohoro sainam-pirenena diso dia manafika an'i London, Manchester, Paris, Barcelona ary Rotterdam amin'ny 23 sy 24 Oktobra? (VAOVAO))
Filed in NEWS ANALYZES	by Martin Vrijland	amin'ny 22 Oktobra 2019	• 37 Comments
Androany aho dia nomena horonantsary iray izay nanandratan'i Ole Dammegard ny sain'ireo mpampihorohoro (anglisy: saina tsy fantatra) nanafika ny mpampihorohoro tany London, Manchester, Paris, Barcelona ary Rotterdam ho an'ny 23 ary 24 Oktobra (FARANY amin'ny farany ambany amin'ny lahatsoratra). Nosoratako i Ole Dammegard, mpiasan'ny haino aman-jery solontena Danoà, amin'ny maha-mpanohitra mifehy ny lahatsoratra teo aloha. Midika izany fa mety hampahafantatra ny fahamarinana izy mba hahazoany trosa ary ho toy ny harato fiarovana amin'ny fahefana eo amin'ny fitondrana. Ny tongotra mifehy dia mety hambara zavatra indraindray. Mazava ho azy fa mety ho diso aho fa ny ahiahy amiko dia ny hoe Dammegard dia paika voafehy toy izany.
Niaro ny mpiasan'ny haino aman-jery hafa antsoina hoe Zen Gardner izy taloha. Hita fa afaka niara-nifandray tamin'ny sekta Zanaky ny Andriamanitra ity Zen Gardner (rehefa avy nalaza nandritra ny taona maro tao amin'ny haino aman-jery hafa). in ity lahatsoratra ity en ity lahatsoratra ity Nohazavaiko ny fomba ifaninan'ny lehilahy eo alohan'ny haino aman-jery hafa, ary avy eo hilentika ilay sambo. Ny iray tampoka dia lasa mpikambana ao amin'ny kolotsaina iray manome voninahitra ny pedofilia ary ny iray hafa dia namono tena fa mivantana amin'ny fahitalavitra (tsy ho velona intsony any aoriana kely). Halalino ireo lahatsoratra ireo mba hahitana hoe manao ahoana ny lalao mpanohitra voafehy.
Dammegard dia miorina amin'ny fampahalalana momba ny fanafihan'ny mpampihorohoro efa akaiky (araka ny teniny ihany) momba ny fanaraha-maso ny fampahalalana mivaingana nandritra ny taona maro. Tsy azoko atao ny mandray ny fahatsapana fa omena azy izy. Raha ny amiko aloha dia midika izany fa efa manana iray isika fiarovana amin'ny tambajotra fiarovana atomboka, izany aorian'ny fanafihana rehetra dia afaka misambotra azy rehetra indray ny mpitady ny fahamarinana. Rehefa dinihina tokoa, izy no mahery fo izay efa naminany mialoha an'izany rehetra izany.
Raha ny amiko, tsy tokony ho gaga isika raha tonga ny fanafihana (saina tsy marina). Amin'izay dia mety hahazo "vondrom-piarahamonina" vaovao vaovao isika eto amin'ny Internet ary ho tanteraka tanteraka ao anaty paosin'ny serivisy ireo vondron-javatra marina, satria vao maraina dia nanangana ny tompon'andraikitra voalohany (Ole Dammegard) izy ireo. Toy izany ny lalao an-tsokosoko ny fanoherana voafehy nandritra ny am-polony taona, ary toy izao no hiseho amin'ity indray mandeha ity.
I Ole dia hametraka ny fampahalalana azy amin'ny angona avy amin'ny orinasa iray antsoina hoe Crisis Solutions (krisis-solutions.com). Ny valahany ambany ambany dia milaza fa mahazo ny fampahalalana avy amin'ny tolotra iray izay mifehy ny hetsika faneva sandoka.
Dammegard dia milaza mialoha rahampitso sy ny ampitson'iny fanafihana 39 any amin'ireo tanàna dimy voalaza. Ny fandefasana saina sandoka (izay nambara ho fampihorohoroana) dia homena anarana mihitsy aza. Izy io dia hahaliana ny fandidiana "Eagle ranomasina".
Ankoatr'izay, hisy ny fanatanjahan-tena mifandraika amin'ny loza iray tany amin'ny orinasa mpamokatra nokleary any avaratr'i Soeda, izay i Dammegard koa dia miahiahy fa ho mpampihorohoro saina sandoka. Zahao ny tenanao momba ny fomba nanehoan'i Dammegard azy tsara tarehy tamin'ny resadresaka etsy ambany ho mpampianatra ny media hafa. Tsy matoky io lehilahy io aho fa nanazava aho fa eo ambanin'ny tranonkala roa voalaza sy ny zavatra voalaza etsy ambony.
Raha ny tena marina dia tsy ny fanazaran-tena fampihorohoroana ihany, fa ny tena fanafihana (sain-diso) no hanaraka, dia mety hahazo vokatra mifanohitra koa ianao, izany hoe ny serivisy dia hiteny hoe ny fantsona toa an'i Ole Dammegard sy ny media hafa dia meloka amin'izany. fa ny fikambanana mpampihorohoro dia mahatsapa fanazaran-tena sy noho izany dia mampiasa izany toe-javatra izany mba hanatanterahana ny fanafihana tena izy tamin'izany andro izany. Raha fintinina: ireo haino aman-jery hafa voafehy (voafehy) no omena tsiny ao amin'ny blackjack ary izany no antony tsara hanesorana mandrakizay ny zava-drehetra tsy haino aman-jery mahazatra. Raha ny tokony ho izy, ireo haino aman-jery hafa no ireo izay, raha ilaina, dia tsy maintsy mamoaka ireo karazana fanatanjahantena nomanina amin'ny fomba 'miafina raha azo atao'. Avy eo azo lazaina fa ny haino aman-jery hafa no nanampy ny "vondrona mpampihorohoro" miaraka amin'ny fampahafantarana ka izay no izy ireo fotsiny dia afaka nanao fanafihana raha ny niheveran'ny rehetra ho fanazaran-tena izany.
Ny polisy sy ny tafika dia afaka (na dia ny fanafihana sandoka aza, izay noheverina fa tena izy; sain-diso sandoka) dia nilaza fa ireo mpitady ny fahamarinana amin'ny fakan-tsary sy ny fizarana vaovao (jereo ny antson'i Dammegard hanao sary mihetsika). ireo vondrona mpampihorohoro dia nanampy bebe kokoa hatrany, izay nanakana ny asany.
Moa ve tsy fampitahorana lehibe toy izany no nahatonga ny toe-javatra nisy an'i 911? Na dia teo aza ny fanazaran-tena lehibe natao avy amin'ny fikambanana fiarovana amin'ny habakabaka NORAD; izay mandrindra ny seranam-piaramanidina amin'ny fotoana anaovana ny asa fampihorohoroana. Noho izany dia ambany roa sosona azo apetraka miaraka amin'ny haino aman-jery mifandraika amin'izany ny haino aman-jery hafa raha toa ka onja fampitahorana rahampitso sy ny ampitson'iny. Avy eo, ny haino aman-jery hafa sy ny fanambarana voalohany momba ny fanazaran-doza dia tena tompon'andraikitra avokoa.
Inona no toe-javatra iainana; (1) Ole Dammegard dia lasa mpitarika vaovao amin'ny hetsika Fahamarinana ho toy ny harenan'ny herin'ny fiarovana of (2) dia tompon'andraikitra amin'ny fanatanterahana ny asa fampihorohoroana izy amin'ny daty tokony hampidirany hazavana, raha ilaina izany, ny kianja. Na izany na tsy izany dia mbola hita maso na hitranga ny fanazaran-tena na misy (faneva sandoka). Izy io anefa no hifanentana amin'ny fanantenan'ny onjam-panjakan'ny faneva sandoka izay efa voatonona teto amin'ilay tranokala. Afaka mampiasa kickstart i Eropa ho an'ny korontana lehibe efa nomanina. Azo antoka fa amin'izao fotoana izao toa ny hiafaran'ny Brexit amin'izao fotoana izao. Tsy mila afa-tsy korontana izy ireo; ho an'i 'Ordo ab Chao'.
I Dammegard noho izany dia mety hametraka fototra ho an'ny fandraràna azo antoka amin'ny tranonkala iray hafa ary amin'ny polisy, tafika sy 'mpamonjy voina ».
Amin'izao fotoana izao dia tsy misy famantarana ny fanafihana fanafihana na fampihorohoroana. Ny anjara asan'i Dammegard dia kely kokoa noho ny nolazaiko taminy, ary nanao tetika taloha mitovy ihany ry zareo. Tsy izy no lasa maherifo lehibe, izy koa ary izy sy ny mpanohana azy no lasa mpiara-miasa amin'ny fanampiana ny mpampihorohoro amin'ny alàlan'ny fanaovana sary sy polisy. Tsia, lasa lehilahy izy izay afaka manalefaka ny fahatokisan'ny media hafa. Averiko indray, satria efa tsy ela izay no niseho tamin'ny tsy nahitana ilay 'sakaizany, ilay namana lehibe atao hoe Zen Gardner, amin'ny maha-mpikambana sy mpitarika ny sekta an'ny zanak'Andriamanitra. kolotsaina mandrisika ny firaisana amin'ny ankizy. I Ole Dammegard dia efa voaporofo ho shiva ary izao dia manaporofo izany. Iray amin'ireo paikady fiarovana an'ny serivisy ho an'ny fiarovana izany. Eo am-panaovana ny dian-tongotr'izy ireo izy ireo, izay ampahafantarina eraky ny tranokala hafa (izay mifehy tena ihany koa). Avy eo izy ireo dia nitsoka ny zavatra tamin'ny tantara ratsy. Nohazavaiko tao anatin'ireo lahatsoratra teo aloha io fomba fiasa io. Mbola mijanona eto an-tsaiko aho.
Tadidio fa ny olona toa an'i Ole Dammegard dia manohy manambara ny antsasaky ny fahamarinana amin'ny maha-tsikombakomba. Mila manala baraka ny fisaintsainana izy ireo amin'ny alàlan'ny nanangona mpanohana be dia be ary avy eo nametraka ny zavatra mahamenatra. Zen Gardner dia voafehy foana. Ny olona toa an'i Willem Felderhof (Konferansa misokatra) sy i Ole Dammegard dia faly mandray anjara, fa tranonkala toa an'i Ella Ster ihany koa. Ny fanalavirana ahy amin'ireo tahotra ireo no toro-hevitro.
Daty fanontana lahatsoratra tany am-boalohany: 22 Oktobra 2019 16: 47
2023 Ilay taona nifaneraseran'i Eoropa tao amin'ny Fanjakana Ottoman
Ny fomba fampielezankevitra momba ny lozam-pifandraisana 'Red Cross' amin'ny fomba matotra mandrara ny fanararaotana ataon'ny polisy '?
Strasbourg ny fampihorohoroana ny tsena Krismasy sy ny fampihorohoroana mpampihorohoro dia toa tena voatahiry tsara (welcome Eurogendfor)
Ny 'fampihorohoroana dia mpiambina' ny AIVD
Tags: 5, Barcelona, krizy, diso, Featured, sainam-pirenena, orinasa mpamokatra angovo nokleary, London, Manchester, NORAD, fanatanjahan-tena, Ole Dammegard, hetsika, Paris, Rotterdam, Voromahery ranomasina, vahaolana, tanàna, fampihorohoroana, fanafihana fampihorohoroana, sandoka sandoka, dimy, Sweden
22 Oktobra 2019 ao amin'ny 17: 25
"Inona no azoko atao?", Koa aza manaraka ny torohevitr'i Dammegard ary indrindra ny hisorohana ny fisian'ireo hotely ary mividiana sakafo am-bifotsy sy fisotro mandritra ny herinandro vitsivitsy.
Aza mieritreritra hoe mahavita fianjerana lehibe ianao amin'ny alàlan'ny sarimihetsika. Fandrika izany raha mahatsapa ny fandrarana amin'izany. Ka ny toro-hevitro: aza mihaino an'ity herinaratra Ole Dammegard ity.
22 Oktobra 2019 ao amin'ny 18: 16
Ireo mpikatsaka ny fahamarinana dia ho avy tsy ho ela (isaorana ny sampana miafina - Ole Dammegard) ireo mpampihorohoro vaovao. Nanampy ny vondrona mpampihorohoro izy ireo nahazo vaovao tamin'ny alàlan'ny famoahana ny datin'ny fanaovan-tena sy ny toerana ary nandefa olona teny an-dalana izy ireo hanao sary ny polisy sy ny tafika (avelan'ny mpampihorohoro hamaly azy ireo indray).
Zahao ny teniko!
22 Oktobra 2019 ao amin'ny 18: 02
Grapperhaus tsy afaka miandry ...
22 Oktobra 2019 ao amin'ny 18: 42
Reko eto ve hoe "lasa Inofizielle Mitarbeiter"? Mampatsiahy kely an'io vanim-potoana DDR io ..
Io fahitana avy amin'i Grappermaker io dia mampahatsiahy ahy ny vanim-potoana iray hafa, saingy ho diso enim-bolana sy diso aho.
22 Oktobra 2019 ao amin'ny 19: 40
fa maninona no manahirana ny zava-drehetra, omeo fanampiana i Herr Oberst sy ny minisitry ny faminany Staatssicherheit ... satria miara-matanjaka isika 😀
3 Novambra 2019 ao amin'ny 17: 03
Tsy manitatra sira sy martin izahay izao ... fanjakana polisy hahaha
mari-toerana nanoratra hoe:
22 Oktobra 2019 ao amin'ny 21: 33
Jereo ny sary eo amin'ny farany havanana amin'ny lahatsary Ole. Maninona ny maha-tandindona be dia be rehefa tena manambara ny tenanao ho mpikaroka fahamarinana ianao. Ilaina ve ny mamafy fisalasalana?
22 Oktobra 2019 ao amin'ny 22: 37
Ny olona marcos marimarina indrindra dia manamaivana ny fanehoana an'ohatra, izany no fototry ny hafatra am-piandohana.
Fa maninona, ohatra, no nahatonga an'i Ella ster na te hahafantatra tsy hanaparitaka horonantsary MartinVrijland ao amin'ny tranonkalany avy amin'ny fihetsiketsehana Pegida, fa avy amin'izany amboadia amin'ny lamban'ny ondry Olle damnguard.
Maninona no tsy nisaina mafy tao amin'ny OM, ny fanambarana nataon'i Martin Vrijland? satria TSY voamarika ity bilaogera ity, noho izany, olona.
Ilay Dammgard izay miresaka sy mikendry ary tsy mbola nanohana na inona na inona tamin'io fitaovana io. Sain-diso sandoka ny zava-drehetra ary 80 dia misy hoax. Ny olona toa an'i Olle Dammgard dia ratsy fanahy ratsy indrindra, ireo mpamadika ambanin'ny tany (fihetsiketsehana fanoherana) hametraka azy ho toy izany, ny miaramila miaraka amin'ny fanamiana anao aminao any aoriana nitifitra.
Lazao mitovy amin'ireo mpanohitra voafehin'ny WantToKnow, EllaStar, Niburu.co ary maro ireo.
Izy io dia tapakety toa an'i Icke izay tsy voasivana. Raha manao fanambarana mahery vaika momba ny CIA ianao ary mihoatra noho izay tokony andrasana fanadalana, dia mety hieritreritra ianao fa tsia, tsy Olle, Olle dia afaka manohy ny fitazomana ilay vahoaka taitra vao nofohazina, mpamadika lalana nantsoinao olona toa an'i Olle Dammguard , Peck miaraka amina volom-borona marobe fa tsy mihaino
22 Oktobra 2019 ao amin'ny 22: 50
Tsy eken'ny maro fa ny olona iray izay mampiseho ny resaka "lalina indrindra" momba ny PsyOps sy ny "Problem, Reaction, Solution" dia mety ho paosin'ny fahefana.
Tokony ho hitanao fa fantatry ny fahefan'ny fitondrana fa afaka mitazona ny mpanohitra ianao raha toa ka manendry paikady ho mpitarika ny mpanohitra ianao.
Ny paikady mpanohitra miolakolaka toy ny chameleon izay manao mitovy loko sy tsiro toy ny olona tena mieritreritra malalaka. Tena sarotra ho ahy izany, satria misy olona toa an'i Dammegard, nefa koa i Robert Jensen dia manandrana mandika izay tena entiko. Ny tranonkalako no voatsindrona, voasivana hatraiza hatraiza ary voafehy avokoa. Etsy ankilany dia mahazo tsara izy ireo.
Paikady efa tena mahomby sy maranitra.
22 Oktobra 2019 ao amin'ny 22: 58
Voitsy tsara, fa ny psikolojia faobe dia nitohy nandritra ny am-polony taona, angamba izany dia miasa ho an'ny vahoaka, fa tsy ho an'ny rehetra, ary mihamahazo vahana hatrany.
22 Oktobra 2019 ao amin'ny 23: 39
Tamin'izany fomba izany, hadino ny xandernieuws, ny gazety semi-telegraph na ny mpanohitra ambony mifehy toy ny misy.
Toa ireo tranonkala rehetra ireo dia tokony hampifangaro miaraka amin'ny vaovaon'i Olle Dammegard. Tsy dia ratsy loatra ho antsika rehetra fa tsy nifarana tamin'ny radar orana. Mety ho tonga izany, "fanafihana radar", tsy maintsy lasa mpikambana ao amin'ny Xandernieuws na Telegraaf na ellastar ianao
Noho izany dia tsy maintsy mandeha ny lakolosy fanairana.
Satria raha atao hoe marina i Ole, dia ao anaty firaisana tsikombakomba izy, andao atao hoe tsy marina izy avy eo izay antsoina hoe fanentanana na fampitahorana, veloma velively ny media hafa rehetra, fa i Ole dia hidina
ary mbola mitohy ny ambiny satria hafatra tsotra fotsiny izy ireo.
Psikolojia marobe ho an'ny vahoaka nifoha
22 Oktobra 2019 ao amin'ny 23: 44
Eny ary .. De Telegraaf no mitana ny anjara toeran'ny PsyOp mivelatra sy ny tranonkala mpanohitra voafehy no mitana ny haraton'ny fiarovana.
Haratovo fiarovana izay manala ny lokon'ny Vrijland toy ny chameleon.
Ny sivana Facebook sy media sosialy hafa no manao ny ambiny. Ireo tranonkala mifehy ny fifehezana ihany no manosika ny arabe fiarovana ary mangina an'i Vrijland ho faty.
Afa-tsy any Xander ... satria izao, ny rohy miaraka amin'i Geenstijl sy Jensen dia tsy maintsy atao tampoka, satria ataoko foana ireo tranonkala 2 ireo.
23 Oktobra 2019 ao amin'ny 05: 33
Azoko tsara sy azoko tsara izay fanazavanao eo ambony. Na izany aza, izay mbola mahatonga ahy ho be mpampiasa foana dia ny fanontaniana hoe nahoana ny tranokala no mampiasa marika mahazatra. Mitombo ny isan'ireo olona mahita an'ity tandindona ity, koa maninona ity tetika ity. Inona no hevitrao ao ambadik'izany?
23 Oktobra 2019 ao amin'ny 07: 14
Nahatsikaritra ihany koa aho fa i Martin Vrijland dia voalaza fa mitovy amin'ny Jensen ary tsy misy fomba. Mihevitra tokoa izy ireo fa manaja ny rehetra ny tsy hidiran’izany.
Manafintohina ahy koa fa eo amin'ireo valin'ny xandernieuws, ohatra, misy ny valiny izay mahatakatra ny tena zava-misy. Ankehitriny miloko menaka kely, fa miakatra lehibe sy lehibe. Azon'izy ireo ny misambotra izay tadiaviny fa efa tara.
Ny marina efa nandresy.
22 Oktobra 2019 ao amin'ny 22: 21
Azo vakiana ve ao amin'ity tranokala ity i Ole? Minitra 14: dia hoy i 21, "Miorina amin'ny olana taloha, fanehoan-kevitra, vahaolana», ary mamerimberina izany matetika.
Afaka manomboka ny fitsapan-kevitra isika eto. Inona ny toe-javatra nasehon'i Martin hitranga? 😉
Izaho manokana, mihevitra ny scenario 2 no tena maniry amin'ny script. Tarika lehibe iray no atao an-tsehatra amin'ny andiany iray. Tsy mitsaha-mitombo ny fanadihadian'ny haino aman-jery hafa amin'ny politika sy ny media mahazatra. Fotoana "tsara tarehy" izany hamadika ireo media hafa ho ilay volony.
Saingy raha toa ka tsy mandeha araka ny noheverina ny zavatra, ny scenario 1 dia mazava ho azy fa drafi-panampiana mahafinaritra. Noho izany, tsy voatery hisy ny fanafihana efa voaresaka. Raha tsy misy zava-mitranga dia aleo misandratra miaraka hatrany amin'ny fahalalana rehetra i Ole.
Shoe Lace nanoratra hoe:
23 Oktobra 2019 ao amin'ny 04: 21
Tsy mahay ve ny maka sary an-tsaina ny zava-drehetra fa tsy hampiala izany. Andraso mandra-pahavitan'ny famotorana rehetra avy eo dia asio an-tserasera, izay angamba ilay tantara ofisialy mety ho foanana?
23 Oktobra 2019 ao amin'ny 08: 32
Tsia, satria angamba ny fampiadiana hevitra no ampiasaina fa ny mpampihorohoro (raha misy nanjo azy) dia niditra tamin'ny data lehibe..or: ny angona izay azo angonina amin'ny telefaona amin'ny alàlan'ny fahazoan-dàlana manokana (aorian'ny apetraka Apps).
Raha atao teny hafa: ny ankamaroan'ny rindranasa dia mamela anao hidirana amin'ny fitahirizanao eo an-toerana ary mijery izany data, ka ny mpizara data lehibe matetika dia manana ny sarinao sy ny sarinao.
Raha toa ka misy "mpampihorohoro" afaka miditra izany data lehibe izany (mpitsikilo mpiloka) dia hahazo ny sarinao sy ny horonan-tsarinao.
23 Oktobra 2019 ao amin'ny 05: 40
23 Oktobra 2019 ao amin'ny 08: 48
Voatafika mafy i Ole..aldus Ole. Anjaran'izy ireo ny fanavaozana izany. Raha tsorina dia zatra ny mpitady ny fahamarinana dia voatazona amin'ny alàlan'ny Dammegard.
Mazava ho azy fa maro no hihazakazaka aorian'ity tambajotram-piarovana ity fa manankery be daholo izany amiko.
"Ny fomba tsara indrindra hifehezana ny mpanohitra dia ny fitarihana azy io"
Amin'ny maha chameleon tsara azy dia hampiasa ireo andininy ireo ihany i Ole Dammegard.
23 Oktobra 2019 ao amin'ny 08: 49
Alfred Lambremont Webre ... fako mpanohitra faran'izay tsara
23 Oktobra 2019 ao amin'ny 08: 58
I Ole dia afaka mivezivezy amin'ny môtô lafo lafo vidy ary mahita traikefa nahafinaritra indrindra.
Ny andraikiny: efa zatra amin'ny famoretana (ary indrindra fa 'matahotra' .. satria tsy ny olon-drehetra mazava ho azy fa mahery fo toa an'i Ole).
23 Oktobra 2019 ao amin'ny 09: 42
Hey Ole! Angamba tokony efa nametraka fototry ny lalàna vaovao izay mandrara ny fivoriana tsy misy fahazoan-dàlana ianao?
Ellie nanoratra hoe:
23 Oktobra 2019 ao amin'ny 06: 05
Heverina fa marina ny mpanohitra voafehy i Ole. Fantany ve ny tenany? Anisan'ny saina lalina ve izy, sa izy iharan'ny fanodinkodinana?
23 Oktobra 2019 ao amin'ny 08: 43
Tsy dia mitovy amin'ny olona iharan'izany ilay izy? Ianao ihany no mila mijery maso.
23 Oktobra 2019 ao amin'ny 10: 54
Hanomboka izao ve ny lalao?
23 Oktobra 2019 ao amin'ny 17: 13
Betsaka ny olona mieritreritra fa i Ole Dammegard dia fananana CIA:
23 Oktobra 2019 ao amin'ny 22: 32
Tena nampatahotra an'i Ole izany!
Ka milatsaka hatreo amin'ny harona
Avoahy izy..serve..tsy bory mihintsy!
23 Oktobra 2019 ao amin'ny 22: 33
Caroline 4 nanoratra hoe:
24 Oktobra 2019 ao amin'ny 12: 17
Ny lalao 39 tokana fotsiny (Ole)
24 Oktobra 2019 ao amin'ny 16: 33
Ary tao Pauw, mazava ho azy, nifehy bebe kokoa ny resaka omaly .. nanaraka ny vatana 39 tao anaty kamio iray ..
24 Oktobra 2019 ao amin'ny 16: 35
Ny vatana 39 dia tsy mitovy amin'ny fanafihana 39 fa nahatsikaritra izany avy hatrany aho ..
25 Oktobra 2019 ao amin'ny 19: 25
30 Oktobra 2019 ao amin'ny 05: 54
30 Oktobra 2019 ao amin'ny 12: 31
Great! Nosakananay izany fisaorana an'i Ole!
Tohizo hatrany Ole!
Misaotra an'i Ole, i NATO no niara-nivory nanapoaka ny sain-diso!
Wow WauW WauWW !!! Lehilahy mahery fo fotsiny i Ole!
Lamesa be !!
"Fivoriana vonjy maika any Brussels!" Ny ahy
1 Novambra 2019 ao amin'ny 00: 09
Hatraiza ny halehiben'ny famantarana sy ny / teknika NLP ao anatin'izany horonantsary izany?
Manontany izany aho satria mahatsikaritra aho fa variana amin'ny sisin'ny Ole izay mampahatsiaro ahy ny hoditry ny bibilava. Marihiko ihany koa ny fomba fijerin'i Ole amin'ity horonantsary ity. Izy dia akaiky kokoa ary mitsinjo ny mpihaino.
1 Novambra 2019 ao amin'ny 00: 59
ireo no teknika tsy hita maso izay ampiasaina
30 Oktobra 2019 ao amin'ny 06: 09
Fanavaozana etsy ambony, 33.39 minitra eto amin'ny efijery, mahafinaritra ireo olona.
« Ny PsyOp 'fanam-pinoana lalina' noho ny nanesoranao ny fahafahanao sy ny fampidirana 'polisy' eritreritra (part 3)
Ny famonoana indroa an'i Gina sy Marinus ao amin'ny sinema Pathé Groningen »
Total visits: 13.807.340
Danny op "Tsy mino ny New World Order" i Robert Jensen: manaporofo fa mpanohitra i Jensen.nl
Mind Supply op "Tsy mino ny New World Order" i Robert Jensen: manaporofo fa mpanohitra i Jensen.nl
Zonnetje op Nanomboka ve ny fanafihana? Ny psycholance dia efa nomena ilay hazavana maitso ao 2018 miorina amin'ny raharaha Els Borst / Bart van U.
Marga op Nanomboka ve ny fanafihana? Ny psycholance dia efa nomena ilay hazavana maitso ao 2018 miorina amin'ny raharaha Els Borst / Bart van U.
ZalmInBlik op Nanomboka ve ny fanafihana? Ny psycholance dia efa nomena ilay hazavana maitso ao 2018 miorina amin'ny raharaha Els Borst / Bart van U.